Kutumira Motokari Kubva kuOman kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Kana iwe uchitsvaga kwakatenderedza kune yakavimbika uye ine ruzivo kambani iyo inonyanya kugadzirisa kutumira mota kubva kuOman kuenda kuUK, wauya kurudyi nzvimbo. Takatumira dzinoverengeka mota, midhudhudhu nedzimwe mota kubva mudunhu rino kuenda kuUK uye tinotarisira zvese zveichi chiitiko kudzikisira mutoro pauri.
Kudzoserwa Kwemotokari muOman
Chekutanga kufunga nezve kubviswa kunyoreswa kwemotokari muOman uye nechikumbiro chemahwendefa ekutengesa kunze kubva kuRTA. Kunyangwe zvingaite senge zvinotyisa, zviri nyore chaizvo uye nekukurumidza kana uchinge uine mapepa nemaplate, timu yedu muOman inogona kutora kuendesa mota isati yagadzirira kuendeswa.
Kuisa & Kutumira kuUK
Isu tinonzwisisa kuti kusiya mota yako kunogona kuva tarisiro inotyisa, zvisinei iwe unogona kuva nechokwadi chekuti vamiriri vedu muOman vakasarudzwa nekuda kwehunyanzvi hwavo uye nebasa rekutarisira. Vachaisa mota yako mumudziyo zvakanyatsonaka, nehunyanzvi kutorwa pamusoro pezvinhu zvese, vasati vazvichengetedza munzvimbo yerwendo.
Seimwe sarudzo yekuwedzera rugare rwako rwepfungwa, tinopa inishuwarenzi yekufambisa iyo inozopa mota kusvika kuzere kukosha kwayo mukati merwendo kubva kuOman kuenda kuUK.
Tumira Mitemo Yemitero
Kana iwe ukasangana nematanho ekuve nemota kwemwedzi mitanhatu uye ukagara kunze kweEU kwemwedzi inopfuura gumi nemaviri nzira yekutenga isati yatanga, unogona kuunza mota kuUK zvachose mutero. Kana mota yangosvika munyika, unozotadziswa kuitengesa kwemwedzi gumi nembiri yekutanga.
Kana iwe ukasasangana nezvinodiwa pamusoro apa, ipapo uchafanirwa kubhadhara mutero wekununura mutero pamwe neVAT, inoverengerwa pamari yawakabhadhara mota. Kune mota dzakavakwa kuUK kune imwechete-kubva pa50 punda mutero pamwe ne20% VAT ukuwo mota dzakavakwa kunze kweUK dziri pasi pe10% yekubhadhara mutero uye 205 VAT.
Iko kune mukana wekuti ukwanise kuwana yakaderedzwa mwero we5% VAT kana mota yauri kutsvaga kutumira yatopfuura makore makumi matatu ekuberekwa uye isina kuchinjwa zvakanyanya kubva pamamiriro ayo epakutanga.
Kwayedza Isati Yanyoreswa
Kunyoresa kusati kwagamuchirwa neDVLA, kuyedzwa uye kugadziridzwa kunodiwa kuti uone kuti mota inokodzera migwagwa yeUK. Mushure mekunge mvumo yetsika yabvumidzwa, isu tinosimudza mota yacho toidzosera kunzvimbo yedu kuti kuyedzwa uku kuitike.
Kana mota yapfuura makore gumi, bvunzo yeMOT inodikanwa pamwe nehuwandu hwekushandurwa uye kuongororwa kwemigwagwa kusati kwanyoreswa.
Kune mota dzakavakwa mukati memakore gumi apfuura, iyo IVA bvunzo inodikanwa. Neraki, uye kudzivirira mota kuti iendeswe kumwe kunhu, tisu chete kambani munyika ine yakazvipira IVA yekuyedza nzira yekugadzirira vafambi mota saka kuitisa ese macheki pane-saiti.
Kugadziridza kwese pamotokari dzese kunosanganisira kugadziridzwa kwemwenje kuitira kuti zvienderane nenhungamiro yeUK, kuiswa kwemwenje yemubvumbi kumashure pamotokari dzisina kukodzerwa navo seyakajairwa uye shanduko yesmeterometer kubva km / h kusvika mph.
Kunyoresa neDVLA & UK Nhamba Mahwendefa
Kana mota yapfuura bvunzo dzakakodzera uye zvese zvigadziriso zvapedzwa, inogona kunyoreswa neDVLA. Pachinyakare yakareba yakareba maitiro, isu tinokwanisa kupfupisa iyi nguva yakatarwa nekuve nekuzvipira DVLA Akaunti Manager chete kune Yangu Mota Kunze vatengi.
Hwendefa dzemotokari dzako nyowani dzekuUK dzinogona kuzogadzirirwa kana mvumo yapiwa, zvichireva kuti wave kugona kutyaira pamugwagwa weUK. Chekupedzisira chesevhisi kusarudza kuti ungade here kusimudza mota kubva kuEast Midlands depo kana kuronga kuti tiendese takananga kwauri.
Tinogona kumhanyisa maitiro ekutumira mota kubva kuOman kuenda kuUK panguva imwechete sekubvisa kumanikidza kwakawanda pauri, izvo zvatinotenda kuti zvinoenzana nemamiriro ekukunda-kuhwina kwese kwese. Kuti tikurukure izvi zvizere, tipei runhare nhasi pa + 44 (0) 1332 81 0442 uye isu ticha tsanangura mabatiro atingaite iwe.